Global Voices teny Malagasy » Mali: Mangina Tanteraka Ny Serasera Ao An-toerana · Global Voices teny Malagasy » Print
Mali: Mangina Tanteraka Ny Serasera Ao An-toerana
Voadika ny 10 Avrily 2012 13:57 GMT 1	 · Mpanoratra Philippe Léveillée Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Mali, Ady & Fifandirana, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zon'olombelona
Hiatrika fifidianana ny Maliana atsy ho atsy. Samy mikarakara ny kaonty twitter-ny, ny facebook sy ny google + avokoa ireo kandidà matanjaka. Ny olom-pirenena kosa miomana amin'ny lahatsoratra bilaogy sy ny fandefasana bitsika. Sahira-tsaina noho ny fanonganam-panjakana sy ny mety ho fivakisan'i Mali Avaratra avokoa ny rehetra .
Raha tonga tsikelikely ny vaovao avy any Avaratra, izay mitoka-monina sy tsy manana herinaratra, afaka manao fanentanana amin'ny alalan'ny aterineto kosa ny ao Atsimo.
Ringotra (antenne) parabolika ao Mali tao amin'ny twitter an'i @Mbokoniko
Ahitana mpikambana 303 ao amin'ny pejy Facebook-ny ny Collectif des Ressortissants du Nord (COREN) ( Ny Fitambaramben’ ny Olom-pirenena ao Avaratra). Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, nanentana ireo maliana ny COREN ny amin'ny fitandroana ny mahairay ny firenena Mali. Natao indrindra ny pejy Facebook mba hamoahana ireo tranga maroloha hiseho mandritra ny herinandro maro hoavy na koa hanehoana ny firaisankinany:
Sata ao amin'ny facebook manentana ny amin'ny mahairay an'i Mali
Tototry ny bilaogy, tweet, sy lahatsary avy any ivelany ny tontolon'ny aterineto, somary mangingina kosa ny mpiserasera maliana. Satria iharan'ny fahatapahan-jiro lava matetika ny renivohitra Bamako kanefa tsy misy ny lasantsy tokony hampadehanana ny tobim-pamatsiana herinaratra. Tsy ny fandefasana lahatsoratra araka izany no vaindohan-draharaha fa ny ahitana vaovao momba ny zava-mitranga ao Avaratra.
Tao anatin'ny herinandro, tsy mandeha ny tranokala n'ny du Mouvement National de Libération de l’Azawad ( MNLA) (Hetsika Nasionaly ho Fanahafahana an'i Azawad). Na izany aza, manohy mamoaka lahatsary ao amin'ny kaonty Youtube-ny, Azawad17janoary2012 ny hetsika. Nisafidy nanao fanambarana tao amin'ny onjam-peo frantsay France 24 ny MNLA fa mahaleo-tena izy. Nanafintohina ny maliana izany fanambarana izany ka nampitombo ny hatezerana sy ny vazivazy tao amin'ny aterineto, tahaka ity hita tao amin'ny twitter ity:
“@Skante2 : Fampielezan-kevitry MNLA, tokony hasain'ireo haino aman-jery avokoa ny mpisaratsaraka rehetra manerantany ho vahininy amin'ny fampahalalam-baovao. Ho hita eo ny fitohanana.”
Saingy ny tena malaza, dia ireo endriky ny hetsika islamista Ansar Dine izay tonga tao an-tanànan'i Timbouctou. Nahatratra mpitsidika 7,200 ny sary nalain'ny Fahitalavitra AFP-Télé. Niadian-kevitra be teny an-dalana ao Bamako izany.
Azo lazaina araka izany fa mbola manjaka ao avaratr'i Mali ny korontana, misy ireo sasany mahita fomba hitadiavana tombotsoa amin'izany:
Fivarotana saina Azawad ao amin'ny aterineto
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/04/10/31915/